Small Business SEO: inona no fomba fiasa ara-tsosialy indrindra?
Ny ankamaroan'ny SEO dia maneho teknolojia fanadiovana fikarohana izay tena ilaina ho an'ny fitomboan'ny orinasan-tserasera amin'ny faritra (raha tsy misy eo an-toerana). Raha jerena ny SEO ao an-toerana sy ny teknikam-pikarohana fikarohana mba hanatsara ny fisehoana an-tserasera, dia matetika izy ireo no manararaotra ireto sehatra fototra manaraka ireto toy ny fananganana tranokala mety amin'ny tranonkala, ny fikarakarana fikarohana sandoka mety tsara, ny fananganana rohy ny kalitao, ny marketing marketing ary ny SMM (marketing media sosialy). Eto ambany eto dia hanana fijery fohy momba ny tsirairay avy amin'izy ireo aho.
Optimization eo amin'ny toeram-panodinana
Ny fitrandrahana eo amin'ny toeram-piasana miasa ho an'ny SEO ao an-toerana dia ahitana teknolojia fanadiovana fikarohana mba hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny Internet, miteraka varotra mitombo isam-bolana. Amin'ny ankapobeny, ny SEO eo an-toerana dia mifandraika amin'ny zavatra rehetra atolotra mivantana ao amin'ny pejin'ny tranonkalanao, manomboka amin'ny votoatin'ny pejy miavaka, amin'ny votoatin'ny haino aman-jery tahaka ny sary sy ny horonan-tsary.
Off-site Search Optimization
Off-sit SEO sy ny tsara indrindra fikarohana teknika fanavaozana, indrindra ho an'ny orinasa madinika, mandrakotra ny torolàlana an-tserasera sy ny lisitry ny orinasa. Ankoatra ny lisitry ny lisitra sy ny famandrihana, dia ahitana ny zavatra rehetra ilaina mba hifandraisana amin'ireo indostrian'ny indostria sy ireo mpampiasa hafa ho an'ny teboka fanodinana.
Alohan'ny zavatra hafa, ny fanorenana tranonkala iray tena fototra dia ny fototry ny SEO sy ny teknika fanadiovana fikarohana amin'ny ankapobeny. Mamolavola ny rafitra lojika mety ho an'ny fizarana tsirairay ao amin'ny tranokalanao - manomboka amin'ny pejin-tranonkalanao sy ny pejy momba ny vokatrao na ny serivisy ho an'ny bilaogy fanohanan'ny orinasanao. Mariho anefa, fa ny tranokalan'ny tranokala dia tokony ho raisina an-tanan-droa miaraka amin'ny fikarohana fototra fikarohana fototra. Midika eto aho fa mila manomboka miasa amin'ny tranokalan'ny tranonkalanao ianao amin'ny fitadidiana ireo teny manan-danja indrindra sy ireo sora-bolana manan-danja izay mety hampiasain'ny mpanjifanao amin'ny fikarohana an-tserasera. Amin'izany fomba izany, manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ny Keyword Planner, fitaovana lehibe amin'ny aterineto mba hanampiana anao hanangona ireo teny fanalahidy havanana amin'ny fiheverana ny fahaiza-manaony sy ny maha-zava-dehibe ny indostrian'ny orinasa na ny orinasa kinendry.
Mitantana tetik'asa ara-barotra ao amin'ny votoatin-dresaka azo manome tombontsoa maro ho an'ny fampiroboroboana amin'ny Internet ao amin'ny lisitry ny SERPs. Voalohany indrindra, ny votoatim-pejy tsara sy azo antoka dia ho tsara kokoa amin'ny voka-pikarohana. Faharoa, rehefa vita tsara, dia afaka manampy ny tranonkalanao ho lasa mpitarika manana fahefana indrindra izay tsy maintsy manolotra toerana ambony kokoa. Ary fahatelo, ny paikadim-pivarotana matihanina mahomby dia afaka mamadika ny tranonkalanao ho loharanom-baovao manan-danja kokoa izay fantatrao tsara noho ny mety ho fahafahan'ireo mpanjifa mbola tsy voatsimbina.
Ny fametrahana rohy fananganana rohy dia ampiharina amin'ny fizarana ny votoatin'ny tranonkalanao manerana ny aterineto. Ny rohy kalitao dia heverina ho anisan'ireo sariohatra mavesa-danja indrindra fantatry Google amin'ny isam-pandrosoana rehetra. Ny ilainao mila manana rohy tsara kokoa dia ny miatrika ireo loharano fahatelo miaraka amin'ny manampahefana manan-danja, mifandraika amin'ny lohahevitra na sehatra indostrialy ao an-toerana. Amin'izany fomba izany, dia hahazo fampiroboroboana goavana ianao amin'ny fifamoivoizana, miaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny alalan'ny rohy malaza izay mitondra ny làlana mankany amin'ny blôginao na ny pejy mitongilana Source .